mayhninsi – စာမျက်နှာ 28 – MBC
ယဥၤကျေးမှုခြားသာသနာပြုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ :ဧဝံဂေလိနှင့်သာသနာပြုရေးဌာနမှဦးဆောင်၍ ယဥၤကျေးမှုခြားသာသနာပြုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)ကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်မှ စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်အထိ အသင်းချုပ် HOLTI ခန်းမတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်း သင်တန်းသား (၃၉) ဦးတက်ရောက်ပါဝင်ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကို (၁. ၈. ၂၀၁၈)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နံနက်(၈း၀၀)နာရီအချိန် […]